Xubno ka tirsan Shabaab oo isku dhiibay Ciidanka dowladda hi | dayniiile.com
Home WARKII Xubno ka tirsan Shabaab oo isku dhiibay Ciidanka dowladda hi
Ciidamada nabad sugida Soomaaliya ee ka howlgalla degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxaa ay soo bandhigeen labo Xubnood oo ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab, balse isku soo dhiibay Ciidamada iyo Maamulka degmadaasi.
Labadaan Xubnood oo dhamaantood dhalinyaro ah ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed Tawane Abdi Iyo Deeqow Ibraahin Cabdale.
Waxa ay sheegeen in duruufo farabadan oo jira aawgood ay isaga soo baxeen Ururka Al-Shabaab oo ay ka tirsanaayeen.
Taliska NISA Saldhiga Luuq ee Gobolka Gedo ayaa sheegay in dhalinyaradaan sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay tahay inay dhibaatooyin farabadan ku hayaan Shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay soo dhaweeynayaan cid kasta oo kasoo tageeysa.
Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa ku kordhay degaannada jubbaland iyo Koonfur Galbeed Xubnaha ka tirsan Ururka Al-Shabaab ee isku soo dhiibaya Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Koonfur Galbeed.
Previous articleMaalinti Lixaad oo wali ay socoto qaadashada Shahaada aqoonsiga Xildhibaan
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo ka hadlay lacagtii ay u fasaxday dowladda Soomaaliya
Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Dhuusamareeb